နယ်ပယ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်အထိ အသုံးပြုနိုင်အောင်တိုးချဲ့လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ YouTube Go App! – AsiaApps
February 2, 2018 February 6, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on နယ်ပယ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်အထိ အသုံးပြုနိုင်အောင်တိုးချဲ့လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ YouTube Go App!
Google LCC အနေနဲ့ YouTube Go ဆိုတဲ့ App ကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကပဲ နယ်ပယ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှာအသုံးပြုနိုင်အောင်တိုးချဲ့လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ တောင်အမေရိကန်၊ အာရှအလယ်ပိုင်း နဲ့ အာဖရိက မှာရှိနေတဲ့ နယ်ပယ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကိုတိုးချဲ့လိုက်တာပါ။
YouTube Go စတင်မွေးဖွားရာ နေရာကတော့ အိန္ဒိယလို့ပဲဆိုရမှာပါ။ အိန္ဒိယမှာ Beta Version နဲ့စတင်ထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး တရားဝင်ထွက်ရှိလာတာကတော့ အင်ဒိုနီးရှားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ Download ဆွဲသူဉီးရေ ၁၀ မီလီယမ်အထိရှိရောက်ရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ app လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Live Stream တွေကြည့်ချင်တဲ့အခါ၊ နာမည်ကြီး MTV တွေကြည့်ချင်တဲ့အခါ၊ Video တွေကို Download ဆွဲချင်တဲ့အခါ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို Video တွေမျှဝေချင်တဲ့အခါ အစရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုရင် YouTube Go App ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Video တစ်ခုကို တစ်ခါ Download ဆွဲပြီးသွားတာနဲ့ ကြိုက်တဲ့အချိန်၊ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ အင်တာနက်မလိုပဲကြည့်ရှု့နိုင်ပါပြီ။ Download ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်း Video ရဲ့အရည်အသွေးကိုလိုက်ပြီး ဒေတာ စားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိ Download ဆွဲပြီးတဲ့ Video ကို တခြား Device တစ်ခုကိုလည်းအကူးအပြောင်းလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အလုပ်လုပ်ပုံက Bluetooth နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ဗျ။ Device နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီး “Receive” နဲ့ “Send” ကိုကစားသွားရုံပါပဲ။ (Device နှစ်ခုလုံးမှာ YouTube Go App ရှိနေရပါမယ်)။ အရင်က YouTube Go မှာ Video တွေကိုတစ်ခုချင်းစီသာအကူးအပြောင်းလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပြီး အခုနောက်ဆုံး update ကြောင့် တစ်ခုထပ်မက Video တွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာကူးပြောင်းနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Android တစ်ခုတည်းမှာသာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ App ပါ။
YouTube Go Expands to Over 130 Countries Worldwidehttps://t.co/UV2thU1NiM
— Gadgets 360 (@Gadgets360) February 2, 2018
Source – YouTube Go App, Via